Screens-niarahaba nomerika - Rindrambaiko famantarana nomerika mora
Sarimihetsika nomerika momba ny fandraisana ny birao, ivotoerana hetsika, fandraisam-bahiny
MBOLA HOROORO NY HOROHANY
Mialà amin'ny tongotra ankavanana ...
Na mahita ny mpanjifanao ao amin'ny biraonao ianao, na mandray hetsika lehibe miaraka amin'ny olona an'arivony, Easy Multi Display dia manampy anao handray ny vahiny amin'ny fomba mora. Na te-hiarahaba anao amin'ny ankapobeny ianao na ny fandraisana anao manokana ho an'ireo vahininao manokana dia azonao atao izany efijery fandraisana nomerika amin'ny EMD.
Mifandraisa aminay anio hiresaka momba ny filanao ary manomboka mamorona fandraisana tsara indrindra amin'ny indostriananao miaraka amin'ny rindrambaiko fampisehoana multimedia sy mahavariana indrindra.
MORAOTRA RATSY FIFANDRAISANA TOKOA
Ny vahiny te-ho voamarika. Ampahafantaro azy ireo fa mankasitraka izy ireo manomboka amin'ny fotoana hidirany am-baravarana miaraka amin'ny fandraisana digital.
FAMPISORANA FANTATRA NY TOKONY MAMONJY ANY
Efa nanatrika ivon-fampirantiana na efitrano fampihaonana ve ianao ary tsy nahazo antoka raha tonga amin'ny toerana mety ianao? Ny fampisehoana nomerika no manome toky ny vahiny fa nahita anao.
HERINANDRAIKITRA & SERVICES
Aorian'ny fandraisana anao ny vahiny, azonao atao ny mizara fampahalalana manan-danja momba ny orinasanao na ny hetsika, toy ny fandaharam-potoana, torolàlana ary serivisy hafa atolotra.
Ny mari-pamantarana mavitrika amin'ny fanazaran-tena ataontsika dia mampahafantatra sy manome toky ny marary antsika. Io dia mamela ny fametrahana tarehy eo ambadiky ny anarana! Mampiseho toro-hevitra azo ampiharina ho an'ny marary anay koa izahay. Mahasoa izany ary mahatonga ny fiandrasana ho fohy kokoa.
Ny EMD dia manana vidiny manohitra ny fifaninanana rehetra! Ny vidiny dia tokana ary tena manatsara ary tsy misy sata miafina. Ny ekipan'ny EMD dia tena mandray andraikitra ary mandinika izay ilaiko rehetra.
Manager ny trano fonenana, Louvain-la-Neuve
Ao amin'ny UNICEF dia mampiasa Easy Multi Display ao anaty efitraninay izahay, mba hampisehoana ireo hetsika ataontsika hanampiana ireo ankizy eran'izao tontolo izao. Ity no fotoana azontsika atao hampisehoana ny fanoloran-tenantsika amin'ny fomba mavitrika - amin'ny fihetsem-po.
Basic Local Network Access 2X PC (mila fahazoan-dàlana 2: PC Server sy PC Player)
Fidirana tambajotra mandroso
Mifandraisa aminay amin'ny vidin'ny.
Tianay fotsiny ny mpanjifanay fa tsotra ny fampisehoana ny haino aman-jery misy azy ireo amin'ny Easy Multi Display. Ny interface tsara amin'ny rindrambaiko dia mitari-dalana anao amin'ny dingana dingana isaky ny dingana, manontany anao ireo fanontaniana mety rehetra eny an-dalana. Tsy mila mpampianatra teknisiana ianao raha mitsangana sy mihazakazaka miaraka amin'ny Easy Multi Display.
Ny mpamorona goavam-bolo mora dia hitari-dalana anao amin'ny dingana fanamboarana.
Tehirizo ireo fanamafisana fampisehoana marobe ary amboary mora.
Mila fanampiana fanampiny fanampiny? Hamarino ny Drafitra Fivarotram-bolo ato aminay izay misy fiofanana sy fanohanana rindrambaiko 1 ora.
MITADIAVA NY FAHORO FOTSINY SY
Te-hahita Easy Seho fampisehoana amin'ny hetsika?
Mifandraisa aminay mba handamina demo maimaimpoana, na handray fiofanana avy amin'ny ekipa teknika izahay.